ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s Apps
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s Likes
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s ၏မိတ်ဆွေများ
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s Groups
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s Discussions
ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲ။ What must we do???
Started this discussion. Last reply by ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) Aug 16, 2012.4Replies0Likes
လူသားတွေအားလုံးဟာ "လူ" ဆိုတဲ့ အကောင်းဆုံးသောဘဝကိုရနေပါပြီ။ရရှိပြီးတဲ့ အကောင်းဆုံးသော ဘဝမှာ သာမန်ပုထုဇဉ်တို့ထက်ပိုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ လူသားဖြစ်ဖို့ ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲ?????ဘာဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s ၏ 'အိမ်စောင့်နတ်နှင့် ပဌာန်းရွတ်ခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
phyuthi liked ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s photo
phyuthi သည်ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Khin Aye သည်ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s ၏ 'ဘာဝနာအမိုးကျဲတဲ့စိတ်ဟာ မိုးမလုံတဲ့အိမ်ပါပဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
A BuddhismworldAdmin သည်ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s ၏ 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် အလှူ အောင်ပွဲ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် သဒ္ဓါဖြူ's၏ 'ခမ်းနားခြင်းကင်းမဲ့တဲ့ ခွေးသေတစ်ကောင်ရဲ့ ဈာပန'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"သာဓု သာဓု သာဓု ခုလိုမျှဝေပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မမ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကို မျက်လုံးထဲမှာ မြင်ယောင်လာပြီးတော့ တော်တေ်ာလေးတော့ တုန်လှုပ်မိတဲ့ သံဝေဂလေးရမိတယ် ဗျာ။"
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) shared အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post on Facebook
"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် အရှင်ဝိမလဝံသ's၏ '"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"သာဓု . . . သာဓု . . . သာဓု ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား . . ."
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ '"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည်ဘလော့တင်သွားပါသည်။
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း
ကဆုန်လပြည့် . . . ဗုဒ္ဓနေ့တွင် သရဏဂုံတည်သူများအဖွဲ့မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မွေးနေ့ပွဲလေးကို ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ မနက်စောစော ၅နာရိတွင် ဘုရားအနေကဇာတင်ခြင်း၊ ဘုရားအမှူးရှိသော ဆရာတော် သံဃာတော်များအား အာရုံဆွမ်း ကပ်လှူပူဇော်ခြင်းနှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား မွေးနေ့ကိတ် ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက် မနက် ၇ နာရီခွဲတွင်တော့ မိဘမဲ့ ကလေးအယောက် ၉၀ နှင့် မွေးနေ့ပွဲကြွောက်လာကြသော ဧည့်ပရိသတ်များအား မုန့်ဟင်းခါး စတုဒီယာကျွေးမွေးဧည့်ခံပြည့် ဘာလီအချိုရည်များ တိုက်ပါတယ်။မနက် ၈နာရီခွဲတွင်တော့ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့…See More
မေ 31, 2013
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s၏ 'ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဟုတ်ကဲ့ . . . အားပေးတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေူးးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။"
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည်ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s ၏ 'ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Thet Thet Oo သည် ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s၏ 'ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မေ 30, 2013
Thet Thet Oo သည်ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s ၏ 'ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
aung aung soe သည် ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s၏ 'ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား မှတ်တမ်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"သာဓု သာဓု သာဓုပါ။ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို ဆထက်တိုး၍ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။"
မေ 29, 2013
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s ၏ဓါတ်ပုံများ
ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်)'s Blog
ဒီဘလော့ကို မေ 29, 2013 တွင်6:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments 1 Like
ကဆုန်လပြည့် . . . ဗုဒ္ဓနေ့တွင် သရဏဂုံတည်သူများအဖွဲ့မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မွေးနေ့ပွဲလေးကို ကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ မနက်စောစော ၅နာရိတွင် ဘုရားအနေကဇာတင်ခြင်း၊ ဘုရားအမှူးရှိသော ဆရာတော် သံဃာတော်များအား အာရုံဆွမ်း ကပ်လှူပူဇော်ခြင်းနှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား မွေးနေ့ကိတ် ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် မနက် ၇ နာရီခွဲတွင်တော့ မိဘမဲ့ ကလေးအယောက် ၉၀ နှင့် မွေးနေ့ပွဲကြွောက်လာကြသော ဧည့်ပရိသတ်များအား မုန့်ဟင်းခါး စတုဒီယာကျွေးမွေးဧည့်ခံပြည့် ဘာလီအချိုရည်များ တိုက်ပါတယ်။
သရဏဂုံတည်သူများ၏ ပထမအကြိမ်မြောက် “ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့” အလှူပွဲ
ဒီဘလော့ကို မေ 13, 2013 တွင်4:13pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments3Likes
၁။ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့တွင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်မည့် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား (ဘုရားလောင်း) အား မယ်တော် မာယာဒေဝီမှ ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။
၂။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ခု၊ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (သက်တော် ၃၅ နှစ်ပြည့်) တွင် ဘုရားအဖြစ်သို့…
ဒီဘလော့ကို မတ် 22, 2013 တွင်7:21pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments6Likes
အရှင်ဘုရား . . . .
တပည့်တော်က ပဌာန်းတရားတော်ကြီးကို သိပ်ကြည်ငြိုတဲ့အတွက် အိမ်မှာ နေ့စဉ် ရွတ်ဖတ်ပါတယ်ဘုရား။
ဒါပေမယ့် လူကြီးတချို့က ‘အိမ်မှာ ပဌာန်းမရွတ်ကောင်းဘူး၊ ရွတ်ရင် အိမ်စောင့်နတ်မနေနိုင်ဘဲ
ထွက်ပြေးတတ်တယ်။ ရွတ်တဲ့လူ ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်’ လို့ပြောကြပါတယ်ဘုရား။…
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 19, 2013 တွင်4:14pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments 1 Like
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဆောင်ပြီးတိုက်ကျွေးမယ့် တရားရေအေးအမြိုက်ဆေးကို လာရောက်သောက်သုံးကြပါရန် ရိုသေ လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
နေရာ . . . ဗိုလ်တထောင်စေတီတော် တိုးချဲ့ဓမ္မရင်ပြင်
နေ့ရက် . . . ၂၂.၂.၂၀၁၃ ရက်နေ့မှ ၂၃.၂.၂၀၁၃ ရက်နေ့အထိ
အချိန် . . . ညစဉ် ၇ နာရီ…
12:28am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 6, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:31am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 11, 2012, တွင် phyoewaihtun မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:16pm အချိန်သြဂုတ် 30, 2012, တွင် စံပယ် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
သာ့သနာ့ အကျိုးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နိုင်သောသူဖြစ်ပါစေလို့ ညီမ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ရှင့်။
11:44am အချိန်သြဂုတ် 29, 2012, တွင် THAT HTUN OO မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:21pm အချိန်သြဂုတ် 26, 2012, တွင် THAT HTUN OO မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျွန်တော်အတွက်အချစ်ကံမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ် တကယ်တော.အကောင်းကံကိုမချစ်လို.အချစ်ကံမကောင်းတာပါ ဓမ်မ မိတ်ဆွေတို.လဲအကောင်းကံကိုချစ်မြတ်နိုးနိုင်ကြပါစေ
6:06pm အချိန်သြဂုတ် 17, 2012, တွင် အရှင်အာစိဏ္ဏ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:59pm အချိန်ဇူလှိုင် 28, 2012, တွင် THAT HTUN OO မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လောဘနဲ.မရှာ ပြောသမျှနှင်.မညီ စောဒကတတ်ရင်တော.ဒေါသပါ ပါလာပြီ စဉ်းစားကာကြည်လိုက်တော. မောဟကရှုပ်နေသည် မသိတဲ.အ၀ိတ်ဇာကြောင်. ကောင်းနိုးထင်ထင် ကြောင်းကျိုးပါမမြင် တက်မက်မူကြီး စွဲလမ်းမူထား ပြုသူမှာဗျာပါဒတွေများပါဘိ သူမသိလေဘူး နောက်တဖန်ပြန်ရရှိ သခါင်္ရကံအစွမ်းကြောင်.၅ခုကိုရရှိ ဇာတိ ဇယာ မရဏ ဗျာပါဒတွေ များပါဘိ သြော်အကြောင်းကြောင်.အကျိုးပါလား သံဝေဂရစရာကဗျာလေးပါ
6:29pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 30, 2011, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။